rewire လုပ်ဖို့ငါလိင်ဆက်ဆံဖို့လိုသလား။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
ငါ rewire နိုင်ရန်အတွက်လိင်ရှိသည်ဖို့ရှိပါသလား?
rewiring အကြောင်းကိုမေးမြန်းခြင်းတစ်ဦးက post:
ငါကပုံမှန် sensitivity ကိုပွနျလညျထူထောငျဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်က rewiring မြန်နှုန်းသောအရာတို့ကိုဖွင့်ကိုကူညီလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ သင်တို့မူကားသူ5မှအသက် 23 ဆိုကနေညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်နေသောကြောင့်ယောက်ျားတစ်ယောက်အစဉ်အဆက်အမြိုးသမီးမြားအဘို့အကသဘာဝလမ်းကြောင်းတည်ထောင်ရန်မဟုတ်ပါဖြစ်စေဘယ်မှာအချက်လည်းမရှိယုံကြည်ကြဘူး။
ဒါမှမဟုတ်သင် ဦး နှောက်ဟာညစ်ညမ်းမှုအတွက်နက်ရှိုင်းစွာချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိတယ်လို့ယုံကြည်ပါသလား။ တကယ်တော့ဒီမိန်းကလေးဟာဘ ၀ တလျှောက်လုံးမှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေတယ်လို့အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ ထို့ကြောင့်ယောက်ျားသည်သူ၏သဘာဝလမ်းကြောင်းများကို 'ပြောရန်' လိုအပ်သည်။
ကျနော့်ရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကတော့အသက် ၂၁ နှစ်မှာသူ့ရဲ့အပျိုစင်ဘဝကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။ သူဟာအရင်တုန်းကမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့အရင်ကလိင်ဆက်ဆံဖူးသူမရှိခဲ့ဖူးပေမယ့်သူဟာ ၆ နှစ်ကြာတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအတွေ့အကြုံကိုရခဲ့တယ်။ သူသည်အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ်တွင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးသူ၏စိတ်ကူးကိုအသုံးမပြုနိုင်ပါ။ ဒါကြောင့်သူဟာမိန်းကလေးတ ဦး ကိုထုဆစ်ဖို့လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ဘာမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီမှာသဘာဝရှိတယ်။ သူသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုအနိမ့်ဆုံးအထိထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပြီးညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောစုဆောင်းမှုများသို့မတိုးမသွားခဲ့ပါ။ ဒါကြောင့်သူဟာအထင်မကြီးခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့်သေချာပေါက် porn များအတွက်ဝါယာကြိုးရှိခဲ့ပါတယ်။
သူ့မှာ ED လက္ခဏာမရှိဘူး။ အခုတော့သူကစူပါငယ်ရွယ်တဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုမစတင်ခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ကျနော့်အမြင်ကတော့သူဟာမိန်းကလေးတစ်ယောက်အတွက်ဝါယာကြိုးရှိနေတာပဲ။ ဒါကြောင့်ယောက်ျားတစ်ယောက်ဟာသူနဲ့ထိတွေ့မှုတစ်ခုတည်းကိုစိုက်ထူပြီးတဲ့အခါမှာ rewiring မပါဘဲတကယ့်မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံနိုင်တဲ့အထိယောက်ျားတစ်ယောက်ဟာ PM နဲ့ O အားလုံးကိုရှောင်နိုင်တယ်လို့သင်ထင်သလား။
ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျမသိသော်လည်း ထပ်မံ၍ ဦး တည်သည် -“ rewiring မပါဘဲ reboot လုပ်နိုင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ကစိုက်ထူမှုကိုတစ်ယောက်တည်းထိနိုင်ရင်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကသင့်ကိုတို့ထိတဲ့အခါမှာစိုက်ထူမှုတစ်ခုရနိုင်တယ်။ အချို့သောထူးခြားသောစိုးရိမ်ပူပန်မှုသည်ပြatနာမဟုတ်ပါ။ ”
"Rewiring" သည်အလွန်အသုံးမကျသောဝေါဟာရဖြစ်ပြီးအချို့ယောက်ျားများက၎င်းကို "စစ်မှန်သောလိင်ဆက်ဆံခြင်း" ဟုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုကြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ သူတို့သည်စစ်မှန်သောသဘောတူညီချက်နှင့်ပြန်လည်ကိုက်ညီရန်လိင်ဆက်ဆံရန်လိုအပ်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ သို့သော်၊ တကယ့်မိန်းကလေးများကိုသာစဉ်းစားခြင်း၊ ငါအသက် ၁၃ နှစ်မှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်မစခင်တာရှည်မိန်းကလေးတွေနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့တယ်။
ဒါကြောင့်ဟုတ်တယ်၊ ဘယ်သူကမှတကယ့်မိတ်ဖက်တွေနဲ့ပြန်လည်ဆက်သွယ်နိုင်မယ်ထင်တယ်။ တချို့ကမင်းရဲ့သူငယ်ချင်းလိုဘာကြောင့်လဲ၊ တချို့ကျတော့ရုန်းကန်နေရတယ်။ ဒါပေမဲ့အသက် ၁၂ နှစ်မှာမဟုတ်ဘဲ ၁၅ နှစ်အရွယ်မှာစပြီးညစ်ညမ်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာအကြောင်းတစ်ခုရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ အာရုံကြောအဆက်အသွယ်အမြောက်အများကိုအသက် ၁၁ နှစ်တွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးများစွာသောသူတို့ကိုအသက် ၁၅ နှစ်အရွယ်တွင်ဖြတ်ထုတ်သည်။ အင်တာနက်သည်ညစ်ညမ်းမှုကဲ့သို့သောသဘာဝလွန်လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုတွင်စတင်သည်။
မှတ်ချက် - ယောက်ျားလေးအချို့သည်ပြည့်တန်ဆာများသို့လာရောက်လည်ပတ်ခြင်း (သို့) ပြည့်တန်ဆာများသို့ပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသို့ပြန်သွားရန်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်သို့လာရောက်လည်ပတ်ရန်အကြံပြုကြသည်။ ငါဒီ၏ကငျြ့တရားသို့မရလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သူကအဓိပ္ပာယ်မရှိသောနှင့်ဖြစ်ကောင်းကောင်းသောထက်အန္တရာယ်ပိုမိုလုပ်ပေး။ ပထမ ဦး စွာ rewiring သည်လေ့လာခြင်းဖြစ်ပြီး၊ သင်ယူခြင်းသည်တသမတ်တည်းဖြစ်ရန်လိုအပ်ပြီးထိရောက်သောပြင်ဆင်မှုဖြစ်စေရန်အတွက်လက်တွေ့ဘ ၀ အခြေအနေနှင့်ကိုက်ညီရမည်။ ပြည့်တန်ဆာတစ် ဦး သို့နှစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်သုံးကြိမ်လည်ပတ်ခြင်းသည်မည်သည့်အကျိုးကိုမှမပြုလုပ်ပါ။ ဒုတိယအချက်မှာ rewiring သည်အဖြစ်မှန်နှင့်ကိုက်ညီသင့်သည်။ ပြည့်တန်ဆာနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းသည်တကယ့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခြင်းနှင့်တူသည်။ သင်တင်းနစ်ကစားခြင်းတွင်အဆင်ပြေလိုလျှင်အခမဲ့လေ့ကျင့်ခန်းမပြုလုပ်ပါ။ တတိယအချက်မှာပြည့်တန်ဆာမနှင့်ပြည့်စုံရန်မတတ်နိုင်ခြင်း (များသောအားဖြင့်ဖြစ်လေ့ရှိသည်) သည်သင်၏ ED ပတ်ဝန်းကျင်ရှိစိုးရိမ်မှုများကိုသာအားဖြည့်ပေးလိမ့်မည်။ ဤအကြောင်းအရာကိုကြည့်ပါ - လူတိုင်းသတိပြုပါ, ပြည့်တန်ဆာ .. ငါအမှန်တကယ်ရှုပ်ထွေးအတွက်ဖြစ်ကြောင်းကိုဖြေရှင်းချက်မဟုတ်🙁
ပြည့်တန်ဆာတွေနဲ့ ၀ ိုင်းဝန်းခြင်းအားဖြင့်ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ အဲဒီနောက်ရက် ၁၀၀ အကြာမှာသူတို့ကိုပုံမှန်လည်ပတ်ပါတယ်။ သူတို့နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုမီကျွန်ုပ်၏ကိစ္စသည်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်လာခဲ့သည်။ အခုတော့ငါနောက်ပိုင်းမှာငါကငါ့အ gf သို့မဟုတ်မည်သည့်သာမန်မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်အတူအိပ်ပျော်ခြင်းမှကြွလာသောအခါငါဖွင့်ကြောင်းမဖြစ်ကြောင်းကို!
စွဲကိုယ်တိုင်ကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်သည်။ အကယ်၍ တစ်စုံတစ် ဦး သည်အငြိမ့်စွဲစွဲလမ်းသွားပါက၊ အဖြစ်မှန်သည်သူ၏စွဲနှိုင်းယှဉ်လျှင်ဖျော့လိမ့်မည်။ အဖြစ်မှန်ကိုတုန့်ပြန်မှု (မိန်းကလေးအစစ်အမှန်) သည်သူ၏ပုံမှန်မဟုတ်သောပြင်းထန်သောစွဲလမ်းမှုနှင့်မကိုက်ညီပါကသူ၏ dopamine ကျသွားသည်။ ထို့ကြောင့်သူသည်ဘိုးဘေးဘိုးဘွားများထံမှတကယ့်မိန်းကလေးများနှင့်ချိတ်ဆက်မထားပါ (အပြိုင်အဆိုင်စွဲလမ်းမရှိ) ကြည့်ပါ အဘယ်ကြောင့်ငါတစ်ဦးကအဖော်သန်း Porn ပိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကိုရှာပါသလား?
နောက်ထပ်အချက်တစ်ချက်တစ်စုံတစ်ဦးလာသောအခါပျောက် porn ထံမှအကြောင်းကို fantasizes သောအရာကိုဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဖြောင့်ကောင်လေးအဘို့, ကကျောင်းမှာဒါမှမဟုတ် TV ပေါ်မှာညစ်ညမ်းမင်းသမီး, ဒါမှမဟုတ်မိန်းကလေးဖြစ်သနည်း ဒီတစ်ခါလည်းအခြားအချက်တစ်ချက်ရိုးရှင်းစွာပဲသူတို့ရဲ့မျက်မှောက်၌, မိန်းကလေးများန်းကျင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မိမိအမြေအောက်ခန်းထဲမှာတစ်စုံတစ်ယောက်ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားသည်, သို့မဟုတ်သူမိန်းကလေးများနှင့်အတူစကားပြော, ဒါမှမဟုတ်မိန်းကလေးများနှင့်အတူလူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်ပါသလဲ? တွေ့မြင်ပင်လိင်စရာမလိုဘဲ, အစစ်အမှန်အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဘယ်လိုပေါ်စိတ်ကူးများများအတွက် အခြားသူများနှင့်အတူချိတ်ဆက်ပါမှ Tools များ။ မျက်လုံးချင်းဆုံ။ ပြုံးခြင်းကိုလေ့ကျင့်ပါ။ (သင်ရှက်နေလျှင်သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့်စတင်ပါ။ အလားအလာရှိသောအိမ်ထောင်ဖက်များနှင့်ပူးပေါင်းပါ။ )
ဟုတ်ပါတယ်၊ porn ကိုသုံးတဲ့ယောက်ျားအများစုမှာ ED မရှိဘူး၊ ဒါကြောင့်သဘာဝကခိုင်မာတယ်။ သို့သော်၊ ကျွန်ုပ်သည် ED, DE နှင့်မြင့်မားသောအင်တာနက် porn ကိုလူငယ်များနှင့်ချိတ်ဆက်မိသောယောက်ျားများတွင်ပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံခြင်း၌ပိုမိုစိတ်ပျက်စရာကောင်းသောလမ်းကြောင်းကိုဆက်လက်မြင်တွေ့ရလိမ့်မည်ဟုထင်ပါသည်။ (ထိုအခါသုတေသနကဒီခန့်မှန်းထွက်သယ်ဆောင်နေသည်: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်မှ porn ကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ် porn / လိင်စွဲချိတ်ဆက်လေ့လာရေး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှနိမ့်ဦးနှောက်ကို Activation နှင့်အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု.)
ဒါက ဦး နှောက်ဟာပလတ်စတစ်ပဲ။ သူတို့ဟာအပြောင်းအလဲလုပ်နေပေမယ့်သတိရှိရှိရွေးချယ်ဖို့လိုတယ်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက Norman Doidge ၏စာအုပ်ကိုကြည့်ပါ ကိုယ်နှိုက်ကလည်းပြောင်းလဲဒါကဦးနှောက်။
ဗီဒီယို: ငါ porn-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကနေ recover အဖြစ်ဘယ်လောက်ကြာကြာငါယနေ့အထိစောင့်ဆိုင်းသင့်သလဲ နောဧသည်ဘုရားကျောင်းအားဖြင့်
ဗီဒီယို: နောဧသည်ဘုရားကျောင်းအသုံးပြုပုံ Porn-သွေးဆောင် Erectile အလုပ်မဖြစ် Beat မှမိန်းမတွေမှာအသုံးပြုခြင်း
ဤသည်၌ ဗီဒီယို DE, ED နှင့် rewiring တို့ကိုဆွေးနွေးခြင်း - အဘယ်ကြောင့်လိင်ကြောင့်အကြီးအခံစားရဘဲနေရသနည်း (porn-သွေးဆောင် desensitization နှင့် DE), နောဧသည်ဘုရားကျောင်းအားဖြင့်
တစ်ဦးကစက်တင်ဘာလ 2015 TEDx ဟောပြောပွဲ အပိုအချိန်လိုအပ်ပြီး porn-induced ED နှင့် anorgasmia တို့ကိုကျော်လွှားရန် / ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သောလူငယ်တစ် ဦး က - TEDX ဟာ porn-induced ED အကြောင်းပြောရမယ်။ “ ဘုရားသခင့်ဘယ်လိုလိင်ဆက်ဆံမှုဖြစ်လာနိုင်မလဲ” ဂရေဂို Schmidinger အားဖြင့်
ဒီကိုကြည့်ပါ ဘလော့ဂ် POSLTE ကိုအားဖြင့် t ကို: မိန်းမတွေမှာသည့်အဖြေရှိပါသလား
rewiring အပေါ်သူ၏ PIED မှတ်ချက်များပျောက်ကင်းအောင်ကုသတဲ့သူတစ်ဦးက reboot
ကျွန်တော့်ရဲ့အတွေ့အကြုံက rebooting ကဆက်ဆံရေးအပြင်ဘက်မှာပါ၊ အများစုအတွက်ချည်နှောင်ခြင်းမရှိသေးပါ (ဘား ၂ လဆက်နွယ်မှုနှင့်တစ်ညရပ်)၊ ငါပထမ ဦး ဆုံးအဘယ်သူမျှမ porn သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိ; အော်ဂဇင်ကိုရှောင်ကြဉ်သည့်အချိန်ကာလတစ်ခုအထိ၊ ထို့နောက်ဆားကစ်အောက်ပိုင်းတွင်လိင်မှုကိစ္စလုပ်ဆောင်မှုတိုးတက်စေရန်အစားအသောက်နှင့်လူနေမှုပုံစံစသည့်ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်လက်ရှိအနေအထားသို့ပြန်ရောက်စေခဲ့သည် (၁၀/၁၀ အလိုအလျောက်စိုက်ထူခြင်း၊ နံနက်သစ်သား၊ MO (အာရုံခံခြင်း၊ စိတ်ကူးယဉ်ခြင်း / လှုံ့ဆော်ခြင်းမရှိ))၊ ထို့ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဆက်ဆံရေးတစ်ခု၏အကူအညီမပါဘဲပြန်လည် reboot လုပ်ပြီဟုခံစားရပြီး၎င်းသည် rebooting လုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ဆက်ဆံရေးတစ်ခုကကျွန်ုပ်အတွက် ပို၍ ခက်ခဲစေလိမ့်မည်ဟုရိုးရိုးသားသားခံစားမိသည်။ (လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်ကသင့်အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမျှော်လင့်ချက်ထားခြင်းနှင့်မကြာခဏသတိပြုမိသည့်အော်ဂဇင်ဖြစ်နိုင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ rebooting ကိုရွှေ့ဆိုင်းခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းမှုကိုကျော်လွှားရန်ကျွန်ုပ်၏တိုးတက်မှုကိုနှောင့်နှေးစေခြင်း) ဖြစ်သည်။
ငါ့အယူအဆမှာ porn neuron လမ်းကြောင်းအသုံးပြုမှုကိုအသုံးမပြုနိုင်ခြင်းကြောင့်ချန်ထားခြင်းအားဖြင့်ငါ့ကိုဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သို့ပြန်စေခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ငါနှင့်မိတ်ဖက်တစ်ယောက်နှင့်ပေါင်းသင်းရန်အခြေအနေရှိနေသောဆက်ဆံရေးတွင်မဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။